नायिका नीता डान्स टिचर बनेपछि…
काठमाडौं । नेपाली पहिलो फिल्म ‘आमा’ का दुई अभिनेत्री चैत्यदेवी सिंह र भुवन चन्दले निर्माण गर्न लागेको फिल्म ‘साइनो’ मा अभिनेत्री नीता ढुंगाना अनुबन्ध भएकी छन् । दशैंपछि फ्लोरमा जाने यस फिल्ममा नीताको भूमिका विषयमा पनि जानकारी गराइएको छ । चलचित्रमा नीता प्रमुख अभिनेत्रीका साथै डान्स टिचरको भूमिकामा देखिने भएकी छिन् । अभिनेत्री ढुंगाना स्क्रिप्ट […]
‘मिस्टर भर्जिन’मा मरिश्का माग्दै ‘टेन थाउजेन्ट पर पर्सन’ !
काठमाडौं । अभिनेता गौरव पहारी र अभिनेत्री मरिश्का पोखरेल स्टारर कमेडी फिल्म ‘मिस्टर भर्जिन’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलर कमेडी संवादले भरिएको छ । तीन भर्जिन युवाको कथा बोल्ने फिल्मको ट्रेलरमा राजधानीको ठमेलमा फस्टाएको यौन व्यवसायलाई पनि देखाउन खोजिएको छ । फिल्ममा अभिनेत्री पोखरेलले भूमिका पनि यस्तै रहेको ट्रेलरबाट बुझिएको छ । […]
साली कस्को भेनाको ?
काठमाडौं । चललचित्र ‘साली कस्को भेनाको’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘ढल ढल’बोलको सार्वजनिक गीतमा विल्सन विक्रम राई र रजनी गुरुङको केमेस्ट्री मिलेको छ भने बिरेन श्रेष्ठ र सुष्मा कार्कीको जोडीलाई पनि फिचरिंग गरिएको छ । लोकलयमा तयार पारिएको सार्वजनिक गीतमा राजेश पायल राई र मेलिना राई स्वर रहेको छ । पुष्प आचार्यको शब्द […]
तीज गीतः संस्कृतिका नाममा बढ्दो विकृति
काठमाडौं । नेपाली महिलाहरुको महत्वपूर्ण पर्व हो हरितालिका तीज । कतिपय महिलाहरु माइती जानका लागि तीज कुरेरै बसेका हुन्छन् । आफ्ने घर परिवारमा भोगेका दुःख कष्ट, पीर व्यथा माइतीमा गएर पोख्ने, रमाइलो गर्ने, दुई–चार दिन भए पनि सुखसँग रमाउने पर्वका रुपमा समेत तीजलाई महिलाले लिने गर्दछन् । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । प्रविधिले फड्को […]
‘म्यूजिकल थ्रिलर’सँग ‘लभ स्टोरी’को टक्कर
काठमाडौं । गत शुक्रबारबाट बक्स अफिसमा दुई वटा चलचित्र प्रदर्शनमा आए । म्यूजिकल थ्रिलर जनराको ‘चिँ मुसी चिँ’ र लभ स्टोरी ‘रोमियो एन्ड मुना’ प्रदर्शनमा आएका हुन् । प्रदर्शनको पहिलो दिन दुबै चलचित्रले दर्शकको राम्रै साथ पाए । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको व्यापार ओरालो लागिरहेका बेला यी दुई चलचित्रको व्यापारिक कारोबार भने खासै गतिलो देखिदैन […]
निश्चल र स्वस्तिमा फूर्सदिला बनेपछि…
काठमाडौं । ठूलो पर्दामा लामो समयदेखि सफलता हात पार्दै आएका नायक निश्चल बस्नेत र नायिका स्वस्तिमा खड्का अहिले म्यूजिक भिडियमा देखिएका छन् । हातमा चलचित्र नभएपछि उनीहरु म्यूजिक भिडियमो देखिएको हुनसक्ने एकथरीको अनुमान छ भने अर्कोथरीले कलाकार भएपछि जुन क्षेत्रमा पनि उपयुक्त हुनपर्ने अर्कोथरीको तर्क छ । त्यसो त अहिले नेपाली नारीहरुको महत्वपूर्ण चाड हरितालिका […]
पूरै दरबारीया शैली ‘हुकम बक्सियोस्’
काठमाडौं– नेपाली चलचित्र सुश्री सम्पत्तिको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । पाटन दरबारमा खिचिएको चलचित्रको ‘हुकुम बक्सियोस्’ बोलको गीत निर्माणपक्षले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो । गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार सलोन बस्नेत, सारा सिर्पाली र विनोद न्यौपानेलाई फिचरिङ गरिएको छ । कार्यक्रममा चलचित्रका कलकार सलोन, बिनोद, प्रमोद अग्रहरी, राजाराम पौडेल, विशारद बस्नेत, […]
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र बजारमा बायोपिक चलचित्र चल्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण चलचित्र बोबीले पेश गरेको छ । चलचित्र प्रदर्शनमा आएको दोस्रो साता पुग्नै लाग्दा मल्टिप्लेक्स हलमा बोबी हेर्ने दर्शकको फ्लो बढ्दो छ । प्रदर्शनको पहिलो र दोस्रो दिन औसत व्यापार गरेको बोबीले त्यसपछि निरन्तर राम्रो व्यापार गरिरहेको निर्माण पक्ष दाबी गरेको छ । सिंगल थिएटरमा […]
काठमाडौं । ‘मिस नेपाल युएसए २०१८’का लागि २१ प्रतियोगी छानिएका छन् । प्रतियोगिताको यो छैठौ संस्करण हो । बिभिन्न चरणको अडिसनबाट यि प्रतियोगी छानिएको कार्यक्रम ब्यवस्थापन जिम्मा लिएको अमेरिका नेपाल ११ इन्टरटेनमेन्टले जानकारी दिएको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यको डालस शहरमा १९ अगष्टमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको अन्तिम स्पर्धामा अदीति श्रेष्ठ, आइशा ओझा, एन्जिला पौडेल, वर्षा […]
सन्ध्याले देखाइन् सम्भावना
काठमाडौं । अभिनेता अनमोल केसी अभिनीत फिल्म ’ड्रिम्स’बाट डेब्यु गरेकी नायिका सन्ध्या केसीले चलचित्र पण्डित बाजेको लौरीबाट सम्भावना देखाएकी छिन् । त्यसो त पहिलो चलचित्र ड्रिम्सले साम्राज्ञीलाई चर्चाको शिखरमा पु¥यायो, सन्ध्या हराइन् । तर, गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र पण्डित बाजेको लौरीमा सन्ध्याको अभिनयलाई दर्शकले तारिफ गरेका छन् । ड्रिम्सपछि सन्ध्याले दोस्रो फिल्म ’कमलेको बिहे’ […]